OLEE OTú IJI DOZIE ERIRI NGWAỌRỤ ERIRI ADỊGHỊ AGHỌTA NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Na-edezi Ngwaọrụ USB Amaghị Error na Windows 10
Mkpa iji tọghata PDF akwụkwọ na ederede okwu Microsoft, ma ọ bụ DOC ma ọ bụ DOCX, nwere ike ibili n'ọtụtụ ọnọdụ na maka ihe dị iche iche. Onye ọ bụla chọrọ nke a maka ọrụ, onye maka iji onwe ya, ma ihe kachasị mkpa bụ otu - ịkwesịrị ịtụgharị PDF n'ime akwụkwọ nke ga-ekwe omume ma kwekọọ n'ụkpụrụ ụlọ ọrụ a nabatara - MS Office. N'otu oge ahụ, ọ bụ ihe a na-achọsi ike ka ọ bụrụ usoro nhazi mbụ ya. Ihe niile a nwere ike iji Adobe Acrobat DC, nke a maara dị ka Adobe Reader.
Nbudata usoro ihe a, yana ntinye ya, nwere ụzọ aghụghọ na nuances, a kọwara ha niile na ntuziaka na weebụsaịtị anyị, ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-amalite ozugbo iji dozie ọrụ bụ isi - ịtụgharị PDF na Okwu.
Ihe omumu: Esi edezi faịlụ PDF na Adobe Acrobat
Kemgbe ọtụtụ afọ ọ dị, usoro Adobe Acrobat dịwanye mma. Ọ bụrụ na ọ bụ naanị ihe dị mma maka ịgụ ihe, ugbu a, ọtụtụ ọrụ bara uru na mgbakọ ya, gụnyere nke anyị chọrọ.
Rịba ama: mgbe ị wụnye Adobe Acrobat DC na kọmpụta gị, na mmemme niile a gụnyere na ngwugwu Microsoft Office, tabụwa dị iche ga-apụta na ngwá ọrụ - "ACROBAT". N'ime ya ị ga-ahụ ngwaọrụ ndị dị mkpa iji rụọ ọrụ PDF.
1. Mepee faịlụ PDF ịchọrọ ịtụgharị na Adobe Acrobat.
2. Họrọ ihe "Mbupụ PDF"emi odude ke ikpehe ikpehe emi.
3. Họrọ usoro achọrọ (na ọnọdụ anyị, nke a bụ Okwu Microsoft), wee họrọ "Akwụkwọ Okwu" ma ọ bụ "Akwụkwọ 97 - 2003", dabere na ọgbọ nke Office ịchọrọ inweta na mmepụta.
4. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, mee ntọala mbupụ site na ịpị gia n'akụkụ ihe ahụ "Akwụkwọ Okwu".
5. Pịa bọtịnụ ahụ. "Mbupụ".
6. Dee aha faịlụ (nhọrọ).
7. Emeela, a gbanwere faịlụ ahụ.
Adobe Acrobat na-akpaghị aka na-achọpụta ederede na ibe ahụ, Ọzọkwa, a pụrụ iji usoro a iji sụgharịa akwụkwọ ederede n'ime usoro Okwu. Site n'ụzọ, ọ na-aghọta nke ọma mgbe ị na-ebupụ ọ bụghị naanị ederede, kamakwa foto, na-eme ka ha dabara maka edezi (ntụgharị, nzaghachi, wdg) ozugbo na ọnọdụ Microsoft Word.
N'ọnọdụ ahụ mgbe ị na-adịghị mkpa ibupụ faịlụ PDF dum, naanị gị chọrọ klaasị ma ọ bụ mkpakasị dị iche iche, ị nwere ike ịhọrọ nke a na Adobe Acrobat, detuo ya site na ịpị Ctrl + Cwee tinye ya na okwu site na ịpị Ctrl + V. Ntughari nke ederede (ntinye, paragraf, edemede) ga-anọgide na ya dị ka isi iyi ahụ, ma enwere ike gbanwee font size.
Nke a niile, ugbu a, ị maara otú ị ga-esi gbanwee PDF na Okwu. Dịka ị pụrụ ịhụ, ọ dịghị ihe mgbagwoju anya, karịsịa ma ọ bụrụ na i nwere usoro bara uru dị ka Adobe Acrobat na mkpịsị aka gị.